सञ्चालक बन्ने लडाइँ | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण सञ्चालक बन्ने लडाइँ
सञ्चालक बन्ने लडाइँ
द्वापर युगमा पद/शक्तिका लागि महाभारतको लडाइँ भएको थियो भन्ने धार्मिक तथा पौराणिक कथामा पढ्न पाइन्छ । कलियुगमा पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ । गतसाता आर्थिक क्षेत्रका शेयर बजारमा २ ओटा समाचारले प्रमुखता पाए । पहिलो समाचार हिमालयन बैङ्कमा पदका लागि प्रवर्धक बीच को सञ्चालक बन्ने भन्ने विवाद निकै चर्केको चर्चा चलेको थियो । अर्काे समाचार सनराइज बैङ्कले कात्तिक ३० गते गर्ने भनेको वार्षिक साधारणसभा स्थगित गर्‍यो । बैङ्कविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको कारण पाटन उच्च अदालतले तत्कालका लागि कुनै काम नगर्न आदेश दिएकाले साधारणसभा स्थगित भएको थियो । यसमा पनि पदका लागि विवाद भएकाले नै विषय अदालतसम्म पुगेको बताइन्छ । सञ्चालक समितिमा कोको जाने भन्नेमा विवाद भएको बताइन्छ । खासगरी, यस्तो घटना भनेको राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने घटनाहरू हुन् । राजनीतिक दलहरूबीच सरकार गठन र परिवर्तनका क्रममा पदको बाँडफाँड हुँदा मात्र यस्ता विवाद देखिन्थे । राजनीतिक दलका नेताहरूबीच पद÷शक्ति र सुविधाका लागि विवाद हुने, झगडा हुने, दलहरू टुट्नेफुट्ने, सरकार बनाउने, गिराउने फोहोरी खेलहरू हुने गरेकामा अब यस्तो रोग बैङ्कहरूमा पनि देखिन थालेको छ । यो एउटा सरुवा रोगजस्तै हुँदै आइरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि पद र शक्तिका लागि विवाद हुने, झगडा हुने घटना बढ्दै गइरहेका छन् । राजनीतिमा लागेका धेरै जसो नेताहरू ठग, फटाहा, असभ्य, अनपढ, कहीँ नबिकेपछि राजनीतिमा लाग्ने गर्छन् र पो यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । तर, बैङ्किङ क्षेत्रका बैङ्करहरू त बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुन् । बौद्धिक व्यक्तित्व भन्नेहरू पनि पद र पावरका लागि यस्तो असभ्यता ? यो त पैसा देखेपछि महादेवको तीन नेत्र खुल्छन् भनेको उखान जस्तो भएन र ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतका कम्पनीमा सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले कुनै पनि तलब सुविधा पाउँदैनन्, खालि बैठक भत्ता मात्र पाउँछन् भनिन्छ । बैठक बस्दा भत्ता मात्र पाउने सञ्चालक समितिमा जान पनि सञ्चालकबीच यत्रो रडाको मच्चिन्छ त ? त्यसो त सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले कम्पनीमा चलखेल गर्छन् । कतिपय कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउँछन् र फाइदा लिने गर्छन् भनेर सञ्चारमाध्यम तथा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । कतै साँच्चै यस्तो हुने गरेको त छैन ? सनराइज बैङ्कले वार्षिक साधारणसभा हुनुभन्दा २ दिनपहिले साधारणसभा स्थगित भएको सूचना निकालेर शेयरधनीलाई अचम्ममा पार्‍यो । वार्षिक साधारणसभाका लागि भनेर १५ प्रतिशत बोनश शेयरका लागि बूकक्लोजसमेत भइसकेको छ । सनराइज बैङ्क र हिमालयन बैङ्कमा देखिएको यो रोग कतै सरुवा रोग भई अरू बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमा पनि सर्ने त होइन भनेर पनि शेयरधनीहरू र सरोकारवालाहरू चिन्तित हुन थालेका छन् ।
बैङ्कको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेमा विवाद भएर अदालतसम्म पुग्नुको मुख्य कारण पछिल्लो समयको बाफिया ऐन नै हो । पछिल्लो समयमा संसद्बाट पारित भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक सदस्य राख्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले बैङ्कहरूमा यस्तो समस्या आएको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । बाफियामा व्यवस्था भएअनुसार बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूका सञ्चालक समितिमा संस्थापक सदस्यहरूबाट ३ जना, सर्वसाधारण शेयर धनीहरूबाट ३ जना र विशेषज्ञ सञ्चालक १ जना गरी जम्मा ७ जना सञ्चालकमात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा ९ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गरिराखेको थियो ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था अहिलेको बाफियाले गरेको छ । त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्त कम्पनीका सञ्चालक समितिमा र कम्पनीको सीईओमा २ कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि बाफियाले गरेको छ । यही कारणले मेगा बैङ्कको सीईओ अनिल केशरी शाह सेञ्चुरी कमर्शियल बैङ्कमा जान लागेका हुन् । त्यसो त अनिल शाहले मेगा बैङ्कलाई पार लगाउन सकेनन्, त्यसैले बैङ्क नै छाड्न लागे भनेर लगानीकर्ताहरू माझ चर्चा चल्ने गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मेगा बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी ५ रूपैयाँभन्दा बढी छैन ।
पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमा भाँडभैलो जस्तै भइरहेको छ । २ वर्ष पहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले आआफ्नो चुक्तापूँजी लगभग ४ गुणा बढाउनुपर्ने निर्देशन दिएपछि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमा समस्या देखिएको थियो भने पूँजी बढाउन चुनौती पनि थपिएको थियो । यसले शेयर बजारमा नेप्सेमा साथै लगानीकर्ताहरू/शेयर धनीहरूमा समेत प्रभाव पार्‍यो । यसकारण शेयरबजार एक किसिमले डामाडोल नै भयो । थुपै्र लगानीकर्ताहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको पूँजी बढाउनुपर्ने समय सकिए पनि शेयर बजारमा चलखेल भइरह्यो । अहिले फेरि बाफियाकै कारण बैङ्क सञ्चालक समितिमा असर परेको छ । सञ्चालक बन्ने होडबाजीलाई द्वापर युगको महाभारतको लडाइँकै स्वरूप दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्त्यमा तिहारपछि लगातार ओरालो लागेको शेयर बजारमा केही सुधार देखिएको थियो । केही दिन नेप्से पनि बढेकोे थियो भने कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी भएको थियो । यसले लगानीकर्तामा केही आशा पनि जगाएको थियो । गतसाता नेप्से २८ दशमलव ३३ अङ्क बढेको थियो । तर पनि लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुने ठाउँ भने देखिँदैन । फेरि यो साता नेप्से केही ओरालो लागेको छ । यसले गर्दा कहीँ शेयर बजारमा चलखेल भएको त छैन भनेर पनि चर्चा चलेको छ । घटेको बेला खरीद गरेको शेयर विक्री गर्न केही दिन शेयरबजार बढाइएको हो भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो । त्यसो त हरेक महीनाको मसान्ततिर शेयर बजार केही न केही बढेको नै देखिने गरेको छ । कर्जा लिइरहेका कतिपय लगानीकर्तालाई शेयरको मूल्य बढे मार्जिन कल कम मात्र तिरे पुग्ने भएकाले पनि मसान्ततिर शेयरमूल्य बढाइएको हुन सक्ने भनाइ छ । त्यसो त शेयर बजार भनेको कहिले घट्छ कहिले बढ्छ । बजारमा नेप्से घटबढ भइरहन्छ, सधैं घट्ने र सधैं बढ्ने मात्र पनि हुँदैन । घट्ने बढ्ने भनेको यसको विशेषता नै हो । यसकारण लगानीकर्ताहरू डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । राम्रो कम्पनीको शेयर भएका लगानीकर्ता कत्ति पनि डराउनुपर्दैन ।
अहिले निर्वाचनको माहोल छ । देशको शक्ति नै निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचनको कारणले पनि शेयरबजारमा केही मन्दी आएको हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यसो त देशमा हुने राजनीतिक गतिविधिले पनि शेयर बजारमा असर गर्छ । विगतमा पनि यस्तो देखिइसकेको छ । यसकारणले पनि कतिपय लगानीकर्ताहरू हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका छन् । होल्डमा बस्ने लगानीकर्तालाई घटेको बेला शेयर किन्ने फाइदामा हुन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । तर पनि शेयर किन्दा कम्पनीको आर्थिक स्थिति हेरेर मात्र शेयरमा लगानी गर्नुपर्दछ र लगानीकर्ताहरू नै सजग र सचेत हुनुपर्दछ ।
लेखक शेयर लगानीकर्ता हुन् ।